Malunga nathi - Zhenjiang Kingway Optical Co., Ltd.
Siyathemba umgangatho kunye nomgangatho wenkonzo unokunyusa ixabiso lethu lemveliso.
I-Zhenjiang Kingway Optical Inkampani yinkampani ye-lens ebonakalayo kunye nokwenziwa kwesakhelo, esasekwa ngonyaka ka-2011 e-china. Le nkampani ivume i-ISO9001: 2000 esemgangathweni kunye nesatifikethi esibhalisiweyo. Iminyaka yamava kunye nomzamo, ngoku sonwabela igama kwimarike yasekhaya nakwamanye amazwe.
Inkampani yaseZhenjiang Kingway Optical icacisiwe ekwenzeni iilensi zeCR39,1.56,1.61index, iilensi ezimalunga ne-1.67 kunye neelensi ezi-bifocal, iilensi eziqhubekayo kunye neelensi zepolycarbonate. Inkampani ikwaphuhlise uthotho lweelensi ze-1.56 kunye ne-1.61 ze-photochromic, ezinje ngombono omnye, umbono we-bifocal, flat-top, round-top, blended-top, progressive (long & short) nokunye. Zonke iilensi zinokuveliswa kugqityiwe kwaye kugqityiwe.
Inkampani ikwazisa iilensi ze-RX, imveliso entsha eyaziwayo yomzi mveliso we-optical ngenxa yemfuno enkulu yoyilo olwenziwe ngokwezifiso. Sikwavelisa iilensi ze-achromatopsia lens (umbala ongaboniyo) kunye neelensi zokukhusela umqhubi.
Iilensi zethu kunye nezakhelo ziyathengiswa kwihlabathi liphela kwaye zinegama eligqwesileyo kuzo zonke iimarike zayo zaphesheya.